इजिप्टको भन्सार | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, मिश्र
मिश्र यो प्रत्येक यात्रीको गन्तव्य हो। तपाईंको जीवनमा एकचोटि तपाईंले पिरामिडहरू देख्नुहुनेछ र उनीहरूको पुरानो मन्दिरहरू जीवित छन्। शताब्दियौंदेखि, सबै मिस्र जागा, जादूको तिर्खा र जिज्ञासाको सागरहरू।
तर लक्सर, नाइल उपत्यका, पिरामिड वा शाही चिहानहरू भन्दा पर ... तपाईंले मिश्रमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? कुन हो तिनीहरूको चलन, परम्परा अधिक इन्ग्रेन गरिएको, कुन पर्यटक वा स्थानीयका लागि सही वा गलत हो? हेरौं
2 इजिप्टको चलन
मिश्र उत्तरपूर्वी अफ्रिकामा छ र यो प्यालेस्टाईन, सुडान, लिबिया र इजरायलको सीमानामा छ। एक छ धेरै तातो मौसम र गर्मी र सुख्खा हिउँदमा सुख्खा हुन्छ, त्यसैले यदि तापले तपाईंलाई डराउँदछ भने, पछिल्लो मौसममा जानु उत्तम हो, जुन कि तातो भए पनि सहन योग्य नै छ।
यो लगभग बसोबास छ 87 मिलियन मानिस जसको ठूलो बहुमत इस्लाम सुन्नी। आज र शताब्दीहरु को लागी अरबी यहाँ बोलिन्छ तर अरबी जनता इजिप्टेली मुलुकहरुमा पुग्नु भन्दा पहिले यो भाषा कोप्टिक थियो, जुन पुरातन इजिप्टबाट आएको हो।
मैले भनेझैं धेरै मिश्रीहरूले इस्लाम दाबी गर्छन् र तिनीहरूको धर्मले उनीहरूको परम्परा र चलनहरूको राम्रो हिस्सा निकाल्दछ, जुन अनुमति छ र के छैन। उदाहरणका लागि, एक मुस्लिमले दिनको five पटक प्रार्थना गर्नुपर्दछ, शुक्रबारलाई पवित्र दिनको रुपमा मान्नु पर्छ र जुन रमादम महिनाको जस्तो हो जहाँ तिनीहरू उपवास बस्छन् र दिनमा six घण्टा मात्र काम गर्दछन्। परिवार धेरै महत्त्वपूर्ण छ तर आदर हो, त्यसैले वचन आदर छ।
सामाजिक वर्ग प्रासंगिक छ र दैनिक जीवन संचालन गर्दछ तर भविष्यमा पनि मिश्रीको हुन सक्छ। परिवारको स्थिति पैसाले त्यति धेरै दिइएन, जुन महत्त्वपूर्ण छ, हो, तर यसको विगतबाट। सामाजिक गतिशीलता धेरै कम छ, त्यसैले परिवार जहिले पनि अध्ययनको तुलनामा अधिक तौल गर्दछ, यदि आवश्यक छ भने। र को स्थान उल्लेख छैन मिश्री समाजमा महिला। स्पष्ट रूपमा यो एक महिला हुन र एक महिला पर्यटक हुन को लागी सबैभन्दा खराब अरब देशहरू मध्ये एक हो, तपाईं एक पुरुष सँगै भए पनि।
बिभिन्न देशहरूको रीतिथितिको बारेमा लेख्दा, मैले महसुस गरे कि त्यहाँ धेरै समानताहरू छन्। कोरियाली र जापानीजहरु लाई मन पर्यो कसैको घरमा आमन्त्रित गर्दा मिश्रीहरू उपहार ल्याउँछन् (केक, चकलेट वा क्यान्डीहरू तर फूलहरू होइनन् किनभने उनीहरू विवाह र रोगका लागि बढी मूल्यवान छन्)। पनि प्रवेश गर्नु अघि उनीहरूले जुत्ता खोलिदिए। सामान्य कुरा यो हो कि एक मिश्रीले व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नु भन्दा पहिले उसको घरमा धेरै पटक निम्त्याउँदछन्, शिष्टाचारले भनेको हो, र जब तपाईं आफ्नो होस्टलाई बधाई दिनुहुन्छ त्यस दिनको क्रम हुनुपर्दछ।
यदि परिवारमा केटाकेटीहरू छन् भने उनीहरूलाई केही ल्याउन र सम्झन महान छ, उपहार दाहिने हात वा दुबै संग दिइन्छ। उनीहरू दाहिने हातले खान र लहर लाग्छन् र धर्म वा राजनीतिको बारेमा कुरा गर्ने वार्तालापमा पनि अप्ठ्यारो हुन सक्छ, जस्तो कि संसारमा बाँकी नै यदि कुनै व्यक्ति पार्टीलाई शान्तिमय रूपमा राख्न चाहन्छ भने जस्तो भनियो। के बारेमा रक्सी? धर्मले निषेध गर्दछ तर उनीहरूलाई गैर-मुस्लिम पिउने कुनै समस्या छैन (रक्सीले मात बिना)।
माथि मैले भनें कि यो महिलाहरूको लागि राम्रो देश थिएन र मेरी आफ्नै बहिनीले मलाई भनेकी छ कि उनी कहिल्यै कइरोको सडकमा कुनै मानिसबाट डराएको थिइनन्। अनि उनी आफ्नो पतिको साथमा थिइन! मिश्री महिलाहरूसँगको कुराकानीलाई तल झारिन्छकम्तिमा सडकमा, र जब यो कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्न आउँदछ जहाँ तपाईं लाइनमा हुनुपर्दछ, महिलाहरू एकातिर जान्छन् र पुरुषहरू अर्को तिर।
त्यो भन्नु आवश्यक छैन यदि महिला एक्लै यात्रा गर्छिन् भने उनी दुई पटक होशियार हुनुपर्छ धेरै चीजहरूमा: उनी कहाँ हिंड्छिन्, कुन समयमा, उनी कसरी लुगा लिउँछिन्। मेरो विचारमा, सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा असमर्थ निषेधले सबैभन्दा ठूलो खतराहरू निम्त्याउँछ ... अर्कोतर्फ, यदि तपाईं कुनै अवैध कुरा धुम्रपान गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं दुई पटक सोच्नुहुन्छ किनकि तपाईं पुलिसले पक्रेर मिश्रीमा नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्न। जेल
इजिप्टियनहरू अति आतिथ्यशील व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यसैले उनीहरूले तपाईंलाई कफि वा चिया वा सिगरेटहरू प्रस्ताव गर्दछन् र तपाईं ती सबै पिउनुहुन्न भने पनि पेयहरू स्वीकार्नु उत्तम हुन्छ। कुराकानीको बखत आँखा सम्पर्क महत्वपूर्ण छ किनकि यो इमान्दारी र ईमानदारीको पर्यायवाचक हो त्यसैले कहिलेकाँही कुराकानी तीव्र हुन सक्छ। हामीले कुरा गरिरहेका एशियनहरू जस्तो नभई, यो एक मान्छे हो धेरै शारीरिक भाषा त्यसोभए हात र इशाराहरू जताततै उडान गर्दछन्, चिच्याउने वा विचारहरूमा जोड दिन टेबुलमा झुण्डिने।
तालिका बोल्दै, यसमा बसिरहेको बेला तपाइँले तपाइँको होस्टले तपाइँ कहाँ छ भन्न तिर्नु पर्दछ, आफैंमा नपठाउनुहोस्। याद गर्नुहोस्, खाना दाहिने हातले लिइएको हो र सँधै, तपाईं भाँडा को प्रशंसा गर्न पर्छ यदि तपाइँ तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्न भने पनि। तपाईको प्लेट खाली नै छोड्नुहुन्न किनकि अन्यथा यो सबै समयमा भरिनेछ, त्यसैले तपाईले अब उपभोग नगरेको संकेतको लागि उत्तम कुरा भनेको त्यहाँ केही राख्नु हो, सादा दृश्यमा।
के तपाईं छुट्टीमा जाँदै हुनुहुन्न तर व्यापार यात्रामा हुनुहुन्छ? लेबल नियमहरू एक समान-सेक्स ह्यान्डशेक र यदि तपाईं एक पुरुष हुनुहुन्छ र तपाईंको वार्तालाप एक महिला हुनुहुन्छ भने, तपाईंले उनलाई यसको हात मिलाउन पर्खनु पर्छ। अर्को छेउमा छैन। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, त्यसो भए अभिवादनको एक छोटो मञ्च यो लायक छ। यदि त्यहाँ अधिक परिचितता छ भने, गालामा चुम्बनहरू सामान्य छन्, सधैं समान लि of्गका मानिसहरू माझ। पछि, अर्को व्यक्तिको साथ नाम बोल्नको लागि यो अशिष्ट रूख हो, विशेष गरी ब्यापार वार्तामा, त्यसैले शीर्षकहरू प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो।
जब यो ड्रेसिंगको कुरा आउँछ, सामान्यतया, इजिप्टियनहरू धेरै रूढिवादी छन् त्यसैले राम्रो छाप पार्नको लागि यो सरल र सुरुचिपूर्ण हुनु पर्याप्त हुन्छ। पुरुषहरूमा कालो रंगलाई प्राथमिकता दिइन्छ, चिडिएका सामानहरू बिना नै, र महिलाहरूको मामलामा शुद्ध पोसाक उत्तम हुन्छ, घुँडा मुनि स्कर्ट र मूलतः लामो बाहुलाहरू।
छोटकरीमा: यदि तपाइँ इजिप्टमा जानुहुन्छ भने यी चलनहरूको सम्मान गर्नुहोस् र सम्झनुहोस् कि यहाँ धर्म नै सबै कुरा हो। यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ भने, सावधान रहनुहोस् तपाइँ के गर्नुहुन्छ, कसरी लुगा लगाउनुहुन्छ र कहाँ हिँड्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अफ्रिका » मिश्र » इजिप्टको चलन